प्रेम भक्ति हो, आसक्ति होइन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० फाल्गुन ४, आईतवार ०४:२२ गते
प्रेमको सबैभन्दा ठूलो धर्म समर्पण हो, भक्ति हो, आसक्ति होइन । आसक्ति भनेको नाश भएर जाने व्यक्ति, विषय र वस्तुप्रतिको लगाव, अनुराग वा मोह हो । आसक्ति यसैले, पीडादायी हुनेगर्दछ । यदि हामीले कसैको सुन्दर शरीरको संरचना, आकर्षक छाला र मांसपीण्ड मन पराएर उसलाई प्रेम गरेका छौँ भने त्यो शरीरमा विकार पैदा हुनेबित्तिकै उससँगको हाम्रो सामीप्य सधैँका लागि समाप्त हुने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला हामीले चर्को शारीरिक एवम् मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कसैको धनसम्पत्ति देखेर हामी उसप्रति आकर्षित भएका छौँ भने त्यो सम्पत्तिको अभाव हुनासाथ उससँगको हाम्रो सम्बन्ध समाप्त भएर जान्छ ।
आज प्रेमका नाममा भएका धेरै सम्बन्धहरु प्रेम नभएर वासनासँग जोडिएका हुन्छन् । वासनाले केवल आवरण हेर्दछ, बाहिरी चमकधमक हेर्दछ । आज मानिस यदि कसैप्रति आकर्षित भएको छ, प्रेमका नाममा भने केवल शरीरका कारण आकर्षित भएको छ । यसरी शरीरको बाहिरी आकर्षणबाट प्रेरित र आकर्षित भएर भएका प्रेमसम्बन्धहरु बालुवाका घरजस्ता अत्यन्त नाजुक हुन्छन्, अत्यन्त कमजोर हुन्छन्, जुन कुनै पनि बेला परिस्थितिको सानो भोँकामा पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्दछन् ।
आज समाजमा पुरूष र महिलाका बीचमा भएका प्रेमसम्बन्धपछि बनेका घरहरु अधिकांश छिन्नभिन्न भएर गएका छन्, तहसनहस भएर गएका देखिन्छन् । यसो हुनुका पछाडि प्रेमका नाममा वासना हाबी भएर सम्बन्धको विकास हुनु हो । आज हामीले जुन प्रेमको कुरा गर्दछौँ वा अपेक्षा गर्दछौँ, त्यो प्रेममा अलिकति पनि त्याग र समर्पण देखिँदैन । यदि श्रीमान् र श्रीमतीबीच एकअर्कामा समर्पण, निष्ठा र भक्ति हुने हो भने जस्तासुकै परिस्थितिहरु पनि दुवैका लागि अनुकूल हुन बाध्य हुन्छन् ।
आजको प्रेममा केवल स्वार्थ देखिन्छ, केवल अपेक्षा देखिन्छ । यदि कुनै केटाले केटीलाई प्रेम गर्दछ भने केवल शरीर देखेर प्रेम गर्दछ, बाहिरी रुपसज्जा देखेर प्रेम गर्दछ । कुनै केटीले केटालाई प्रेम गर्दछे भने उसको सुगठित र बलिष्ठ शरीर र भौतिक सम्पन्नता देखेर प्रेम गर्दछे । यसरी गरिएका प्रेमसम्बन्धहरु जुनदिन शारीरिक सौन्दर्य, रुप र लावण्य समाप्त भएर जान्छन् वा सम्पत्ति सकिएर जान्छ, त्यसपछि समाप्त भएर जान्छन् ।
बाहिरी आवरणबाट प्रेरित प्रेम हार्दिक पनि हुन सक्दैन । शरीर देखेर प्रेम गर्न सिकेको मान्छे त सधैँ शरीरमै केन्द्रित हुन्छ । शरीर र सुन्दर छाला देख्दासम्म उसको प्रेम पनि कायम रहन्छ, छाला र गालाको पूmर्ति सकिँदाका दिन कथित प्रेम पनि सकिन्छ । त्यस्तो खालको मानिस त्यसपछि फेरि अर्को आकर्षक शरीर र छालाको खोजीमा केन्द्रित हुन थाल्दछ । जब ऊ यसरी नयाँ शरीर र छालामा केन्द्रित हुन्छ, उसको घरसँगको सम्बन्ध पनि तीतो हुन थाल्दछ । श्रीमान्श्रीमतीहरु अलग बस्नुपर्ने स्थिति बन्दछ ।
हामीलाई हाम्रो विचार जति प्रिय छ, हाम्रो शरीर पनि त्यति नै प्रिय अवश्य छ । शरीर नहुने हो भने हामीले चाहेर पनि आफ्नो प्रतिभा, आफ्ना विचार र भावनाहरु अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ । खासगरीकन पुरूष र स्त्रीबीचको शारीरिक आकर्षणलाई पनि हामीले स्वाभाविक, सहज र प्राकृतिक नै मान्नुपर्दछ । तर, शरीरमै केन्द्रित भएर भावनात्मक एवम् वैचारिक सौन्दर्यलाई बिर्सनु भने कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।
साँचो प्रेमीले कसैलाई पनि घृणा गर्दैन । उसका लागि सबै प्रिय हुन्छन् । अभाव र प्राप्तिमा एवम् हुनु र नहुनुमा पनि उसले कहिल्यै विभेद गर्दैन, किनकि प्रेम भनेको विभेद होइन, स्वीकृति हो । प्रेमले कहिल्यै पनि अस्वीकार गर्दैन । पानी परोस्, चाहे घाम लागोस्, चाहे दुःख आओस्, चाहे सुख आओस्, सबैसबै परिस्थितिहरु उसका लागि उत्तिकै प्रिय हुन्छन् ।
प्रेम अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ । कुनै पनि परिस्थितिहरुले उसको केही गर्न सक्दैनन् । बरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु पनि बिस्तारै अनुकूल बन्दै जान थाल्दछन्, सहयोगीका रुपमा देखा पर्दछन् । प्रेममा जुन शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति सायदै अरु केहीमा होला । प्रेम यसरी शक्तिशाली हुनुमा सायद यसको स्वरुप दैवी हुनु पनि होला । प्रेम दैवी अस्तित्व हो । साँचो प्रेम कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, कहिल्यै पनि छिन्नभिन्न भएर जाँदैन, किनकि प्रेमले कहिल्यै अपेक्षा गर्दैन ।
जहाँ अपेक्षा हुन्छ, त्यहाँ प्रेम हुन सक्दैन । यदि हामीले केही पाउने आशामा कसैसँग नजिकिएका हुन्छौँ भने नपाउँदाका दिनमा पनि हामीले उसलाई साथ दिन सक्दैनौँ । अपेक्षा पूरा नहुँदासाथ हामी फेरि टाढा हुन बाध्य हुन्छौँ । तर, यदि हामी अपेक्षाहीन प्रेमको अभ्यास गर्दै छौँ भने हाम्रो प्रेमसम्बन्ध कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन ।
प्रेम भनेको त यस्तो अवस्था हो, जहाँ मैले पाउनुपर्दछ भन्ने भाव कहीँकतै रहँदैन । प्रेमको हृदय केवल दिन चाहन्छ, लिन होइन । दिनु वा त्याग गर्नु प्रेमको धर्म हो । यसैले, जसले केवल पाउन मात्र चाहन्छ, लिन मात्र चाहन्छ, ऊ कठोर हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ । समाजमा यस्ता मान्छे बढ्दै जानु भनेको नै हिंसा र हत्याका घटनामा वृद्धि हुँदै जानु हो । आज लिन मात्र चाहनेहरुको भीड छ । दिनेहरु छैनन् भन्ने होइन, तर उनीहरुको सङ्ख्या अत्यन्त सानो छ ।
सच्चा प्रेमीहरु कस्ता हुन्छन् त, त्यसोभए ? विद्वान्हरु भन्दछन्, सच्चा प्रेमीहरु कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैनन् । कुनै परिस्थितिमा पनि उनीहरुको धैर्य गुम्दैन । चाहे कोही मरोस्, उनीहरुमा अस्वाभाविक चिन्ता बढेर जाँदैन । चाहे कोही जन्मियोस्, उनीहरु चाहिनेभन्दा बढी खुसी हुँदैनन् । उनीहरु कुनै एक जनाका लागि बाँचेका हुँदैनन्, सबैका लागि बाँचेका हुन्छन् । जीवनका जटिल परिस्थितिप्रति अलिकति पनि उनीहरुको मनमा द्वेष हुँदैन ।
जो एक जनाका लागि मरिहत्ते गर्दछ, यो प्रेमी नभएर मानसिक रोगी हो । स्वाभाविक मनोदशाका मानिसहरु कसैप्रति पनि चाहिनेभन्दा धेरै अनुराग राख्दैनन् । जसले ‘तिमी नभए म बाँच्नु पनि बेकार छ’ भनेर आत्महत्या गर्ने सोचाइ राख्दछ, ऊ महाभोगी हो । प्रेमीहरु त योगीजस्तै हुन्छन्, जसले कसैलाई पनि घृणा गर्दैनन्, कसैप्रति पनि अति अनुराग राख्दैनन् । प्रेमीहरु सबैका लागि बाँचेका हुन्छन् । दरिद्रदेखि देवतासम्म सबैका लागि उनीहरुले सोच्दछन् । सानासाना कीटपतङ्गदेखि मनुष्यसम्म सबैप्रति उनीहरुको हृदय खुला हुन्छ । सच्चा प्रेमीहरुले जङ्गलको बिरूवालाई जति मह¤व दिन्छन्, त्यही अनुपातमा समाजको मान्छेलाई दिन्छन् ।
अहिंसा प्रेमको प्राण हो । जहाँ सच्चा प्रेमीहरु हुन्छन्, उनीहरु भ्यालेन्टाइन आयो भनेर बगैँचाका पूmललाई निर्मम तरिकाले चुँडेर कुनै एक जना केटा वा केटीलाई मख्ख पार्ने काम गर्दैनन् । प्रेम भनेको नै हिंसाको विरोध हो । फुलिरहेको पूmल टिप्नु पनि हिंसा हो । कसैलाई मख्ख पार्न निरीह पशुपक्षीको गला रेटेर तिनको रगत र मासुले सहभोज गर्नु अर्को निन्दनीय काम हो । जहाँ प्रेमीहरु हुन्छन्, त्यहाँ मारकाट, हत्याहिंसा र लोभानिपापानि केही हुँदैनन् ।
प्रेम दिव्य र ईश्वरीय हुन्छ । शाश्वत्प्रतिको प्रेम नै वास्तविक प्रेम हो, त्यसैले । प्रेमले कुनै पनि चीज अस्वीकार गर्दैन । सुदामा र श्रीकृष्णकोे प्रेम यस्तै जीवन्त प्रेमको अलौकिक उदाहरण हो । प्रेम सुकिलामुकिला र सम्पन्न घरका मान्छेको मात्रै चरित्र हुन्थ्यो भने सुदामाको प्रेम श्रीकृष्णले कहाँ पाउँथे र ? सम्पूर्ण वैभवका एकमात्र स्रोत भगवान् श्रीकृष्ण र चरम गरिबीको आगोले सेकिएका सुदामाको प्रेमप्रसङ्गले के बताउँछ भने प्रेमले धनी र गरिबको विभेद गर्दैन ।
साँचो प्रेम भनेको भाव हो, हार्दिकता हो, वस्त्र र भौतिक उपहार होइनन् । प्रेम औपचारिकता होइन, सद्भाव हो । श्रीकृष्णका लागि सुदामाले सप्रेम जुन उपहार लिएर आएका थिए कनिकाको, त्योभन्दा मीठो र सुस्वादु अर्को केही थिएन । भौतिक वस्तुहरु आपैmँले प्रेम बोल्ने होइनन् । यदि प्रेम मिसिएको छैन भने लाखौँ पर्ने उपहार पनि अर्थहीन देखिन्छ । तर, प्रेम र हार्दिकता छ भने स्वादहीन वस्तुमा पनि स्वाद भरिएर आउँदोरहेछ, जसरी कृष्णका लागि कनिका स्वादिलो भएर आएको थियो ।
भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ,
‘पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन ः ।’
अर्थात्, जसले मेरा निम्ति प्रेमका साथ पात, फल, पूmल र पानी अर्पण गर्दछ, त्यस्तो अत्यन्त शुद्ध बुद्धि भएको भक्तले प्रेमपूर्वक अर्पण गरेका ती वस्तुहरु मैले सप्रेम ग्रहण गर्दछु, खान्छु । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले यसरी समर्पणको मह¤व बताउनुभएको छ । प्रेमले भरिएको मनले साँच्चै नै केही दिऊँ भन्छ । जो प्रेमी छ, उसको स्वभाव र पहिचान नै त्याग हो, दान हो ।
प्रेमको अर्थ त्याग भएको कुरा हृदयले भन्ने हो, वस्तुले होइन । यदि हामीभित्र वास्तविक प्रेम छ भने पानी, पूmल, फल र पातले पनि ठूलो उपहारको काम गर्दछन् । आज हामीले उपहारका नाममा जेजस्तो परिपाटी अवलम्बन गर्ने गरेका छौँ, त्यो नौटङ्कीसिवाय केही होइन । निश्चित रुपमा प्रेमले दिन चाहन्छ तर डराएर होइन, प्रतिष्ठा र इज्जतको ख्याल राखेर होइन, हृदयको भावनालाई बुझेर । हामीले कसैले केही भन्ला कि भनेर कसैलाई प्रेमको उपहार दिने होइन । हाम्रो उपहारले हाम्रो प्रेमलाई बोल्नुपर्दछ ।
हामीले लाखौँ पर्ने हीराको हार किनेर कुनै प्रेमीलाई दियौँ भने उसले हामीलाई भन्दा धेरै त्यो हीराको हारलाई मह¤व दिन थाल्दछ । उसको अपेक्षा पनि बढ्दै जान्छ । त्यही हीराको हार हामीभित्रको प्रेमको जरोलाई काट्ने कीरामा बदलिने खतरा हुन्छ । यसैले, प्रेमको उपहार पनि सा¤िवक हुनुपर्दछ भन्नु भगवान् श्रीकृष्णको आशय हो । जसले, प्रेममा विश्वास गर्दछ, उसको हृदय व्यापक हुन्छ । जसरी भगवान् श्रीकृष्णका लागि न कोही धेरै प्रिय छन्, न कोही धेरै अप्रिय छन्, त्यसरी नै सच्चा प्रेमीहरु पनि सबैप्रति समान हुन्छन् ।
‘समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।’
अर्थात्, म यो ब्रह्माण्डका सबै विषय र वस्तुहरुप्रति समान रुपले विस्तारित छु, पैmलिएको छु । न मेरा लागि प्रिय छ, न त अप्रिय नै । परन्तु, जुन भक्तले मलाई प्रेमले भज्दछ वा चिन्तन गर्दछ, ऊ ममा रहेको हुन्छ भने म पनि उसमा प्रकट भएको हुन्छु । यो भगवान् श्रीकृष्णको बचन हो । प्रेमीहरु दुवै अलगअलग भए पनि उनीहरुको भावना एउटै हुन्छ । शरीरको विभेद केही होइन । शरीर अलगअलग हुन सक्दछन्, तर मानिसभित्रको विचारमा एकरुपता छ, अनन्यता छ भने कसैले केही गर्न सक्दैन । भगवान् श्रीकृष्णको भक्ति वा प्रेम गर्ने भक्त र भगवान्मा केही हुँदैन ।
सबैप्रति भगवान्को एउटै धारणा र आशीर्वाद छ । तर पनि बारम्बार भगवान्को चिन्तन गर्ने भक्तले निश्चय उहाँको दैवी सामथ्र्य र हैसियत प्राप्त गर्न सक्दछ । प्रेम रुपभन्दा विचार र भावकेन्द्री हुन्छ । भाव नभए शरीरमात्रैले केही हुन सक्दैन । शरीर मात्रैले प्रेम हुने भए मानिसले घरमा मरेका आफन्त वा प्रेमीप्रेमिकाको मृत शरीरलाई नजलाइकन राख्नेथिए ।
प्रेमले नै हाम्रो दुराचारको पनि नाश गर्न सक्दछ । दुराचार पनि प्रेमहीनताको परिणाम हो । यदि दुराचारी नै भए पनि प्रेमको भावना छ भने, कल्याण र त्यागको भावना छ भने उसलाई स्वीकार्नुपर्दछ भन्ने सन्देश श्रीकृष्णको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ः
‘अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यसितो हि सः ।’
अर्थात्, यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेछ भने पनि अनन्यभावले मेरो भक्त भएर मलाई चिन्तन गर्दछ वा मेरो भजन गर्दछ भने पनि उसलाई साधु नै मान्नुपर्दछ, किनकि ऊ उसले सम्यक् विधिले सत्य र शाश्वत्को चिन्तन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ, दृढ निश्चय गरेको छ ।
यदि कसैले सत्यको चिन्तन गर्ने, प्रेमको अभ्यास गर्ने र सबैप्रति कृष्णभावनानुकूल कर्तव्य निर्वाह गर्ने सङ्कल्प गरेको छ भने उसका त्यसपूर्वका दुराचारहरुप्रति क्षमाशील हुनुपर्दछ भन्ने भगवान् श्रीकृष्णको मत रहेको छ । मान्छे शरीरले मात्र सुन्दर र सदाचारी हुने होइन, धर्म, न्याय, सत्य र शाश्वत्को चिन्तनले हो, प्रेमले हो । कृष्णको चिन्तन गर्नुको अर्थ अबदेखि कहिल्यै पनि बदमासी, छक्कापन्जा गर्दिनँ भन्नु हो । कृष्णको स्मरण गर्नुको अर्थ सत्य र इमानको स्मरण गर्नु हो । त्यसैले, जोसँग सत्यप्रति निष्ठा, भक्ति र प्रेम छ, उसको जीवन ऊ स्वयम् र समाजसमेतका लागि उदाहरणीय र उपयोगी हुन्छ ।
यस प्रकार, प्रेम नै सबैथोक हो । त्याग र भक्ति प्रेमका पहिचान हुन् । प्रेम नभएसम्म शान्ति, विकास र सङ्गतिको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले आउनुस्, सबैप्रति प्रेम गरौँ । धर्तीका झारपात, कीराफट्याङ्ग्रा, पशुपक्षी, जीवजनावरदेखि लिएर मनुष्यसम्म सबै हाम्रा हुन् । कसैप्रति पनि असहिष्णु नबनौँ । सबै अवस्थाहरुलाई स्वीकार गरौँ । प्रेम, समर्पण र त्यागको नाम हो भन्ने सर्वदा स्मरण गरौँ । ‘प्रेम भक्ति हो, आसक्ति होइन’ भन्ने मूल मन्त्रको स्मरण र अभ्यासमा नै सम्भवतः प्रेमको मूल्य स्पष्ट हुन सक्दछ ।